भिडियो रिपोर्ट : क्यान्सरजस्तै खतरानाक रोग ब्ल्याक फंगस के हो ? कसरी बच्ने ? - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ जनस्वास्थ्य ∕ भिडियो रिपोर्ट : क्यान्सरजस्तै खतरानाक रोग ब्ल्याक फंगस के हो ? कसरी बच्ने ?
डा. निशा श्रेष्ठ अकुलोप्लाष्टिक सर्जन | ग्लोबल आई सेन्टर | पुरानो बानेश्वर मंगलबार, २०७८ असार ८ गते, १७:०४ मा प्रकाशित
ब्ल्याक फंगस एउटा ढुसीबाट हुने रोग हो । यो ढुसी सडेगलेको खानेकुरा र ओसिएको ठाउँमा पाइने डुसी हो । शरीरमा प्रतिरोध क्षमता बलियो हुँदा यसले खासै असर गर्न सक्दैन् । तर, कुनै रोगहरु वा कुनै औषधीको प्रयोगले गर्दा शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुँदा यो ढुसी शरीरमा प्रवेश गरेर हानी गर्दछ ।
यो श्वास लिँदा नाकबाट शरीरमा प्रवेश गर्न सक्छ । र, घाउ चोट लाग्दा पनि शरीरमा पस्ने सम्भावना हुन्छ । नाक हुँदै आँखा हुँदै दिमागमा समेत पुग्छ । धेरै असर गरेमा ज्यान नै जाने समेत हुनसक्छ ।
‘स्टोरोइड’ औषधी प्रयोग गर्दा हुने साइड इफेक्ट भनेको शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गराउँछ । र, यो रोग पनि प्रतिरोध क्षमता कमजोर हुनेहरुलाई नै लाग्ने गर्छ । कोभिड—१९ ले गर्दा पनि शरीर कमजोर हुने गर्छ । संक्रमितलाई पनि सो औषधी प्रयोग गर्न दिइन्छ । जसले गर्दा डुसी लाग्ने सम्भावना हुनसक्छ ।
मधुमेहका रोग भएकाहरुमा र शरीरमा तनाव हुँदा पनि यसको संक्रमण हुन सक्छ ।
यसले आँखालाई पनि धेरै असर पार्छ । आँखा चलाउन नसकिने, आँखा बहिरा आउने, रातो हुने, ढकनी तल झर्ने र धेरै नै बिगार गर्दा आँखाको दृष्टि नै जाने खतरा हुन्छ ।
एकपट्टीको ठाउँको दुख्ने, नशा सम्बन्धि समस्या देखिने पनि हुन्छ । यस्तै, नाक सुख्खा हुने नाकबाट रगत मिसिएको र कालो सिगान आउने समस्या पनि यसका लक्षण हुन् ।
ब्ल्याक फंगसबाट बच्न के गर्ने ?
वातावरण सफा र सुक्खा राख्ने
हावाबाट सर्ने हुँदा मास्कको प्रयोग गर्ने
कोभिड लागेका सुगरका बिरामीले रेगुलर चेक अप गराउने
ब्ल्यांक फंगसको लक्षण देखिएमा तुरुन्तै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने
अक्सिजन लिने व्यक्तिको अक्सिजन पाइप रेगुलेटर सफा राख्ने
स्टोरोइड औषधी चिकित्सकको सुझावमा मात्र लिने
ब्ल्याक फंगसको उपचार कसरी गर्ने ?
एउटा औषधी र अर्का सर्जरीबाट गर्न सकिन्छ । ढुसी देखिएका बिरामीले ‘एन्थोटेसन बी’ दिइन्छ । र, सर्जरीमा भने ढुसी जुन भागमा देखिएको छ त्योअनुसार भाग काटेर फाल्दा ठिक हुने हुन्छ ।
नाकमा मात्रै सिमित हुँदा औषधी पश्चात यसको निको हुने दर भने ८० प्रतिशत छ । आँखामा मात्रै सिमित छ भने उपचारपछि ६० प्रतिशत जति ठिक हुने सम्भावना हुन्छ । तर, दिमागमा पुगेको छ भने चाहिँ २० देखि ३० प्रतिशतलाई मात्र बचाउन सकिन्छ ।